Akụkọ Mohsin Ali na Martech Zone |
Edemede site na Mohsin ali
Mohsin bụ onye ndụmọdụ na onye nkuzi n'obi. Ọ nọ na ụlọ ọrụ ahụ ruo afọ iri, na-enyere ndị mmadụ aka imezu ebumnuche ha site na ịzụ ahịa dijitalụ. Ọ bụghị naanị inwetakwu okporo ụzọ ma ọ bụ ịtụgharị nke ọma - ọ bụ maka ijide n'aka na ị nwere ike izipu ozi gị nke ọma ka ndị na-ege gị ntị wee ghọta ihe ịchọrọ ka ha mee!
Nzọụkwụ 5 iji mepụta atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya na-emeri
Ịre ahịa ọdịnaya bụ ụzọ na-eto ngwa ngwa na ụzọ kachasị dị irè iji zụọ ahịa gị, mana ịmepụta atụmatụ mmeri nwere ike isi ike. Ọtụtụ ndị ahịa ọdịnaya na-agbasi mbọ ike na atụmatụ ha n'ihi na ha enweghị usoro doro anya maka ịmepụta ya. Ha na-egbu oge na usoro na-adịghị arụ ọrụ kama ilekwasị anya na atụmatụ ndị na-arụ ọrụ. Ntuziaka a na-akọwapụta usoro 5 ịchọrọ ịmepụta atụmatụ ịre ahịa ọdịnaya na-emeri nke gị ka ị nwee ike ịmalite azụmahịa gị